Semaltiko aditua Online iruzurrei buruz - Zer eta nola
Kubiridzira kwepaIndaneti kunowanzotumidzwa se "utera hwekutsvaga" kana "scam". Iko rudzi rwekubiridzirarinowanikwa mune mafomu akawanda, akadai seymail spam. Chirango chekushandisa kana kuita mari yekunyengedza mari yemirairo makore gumi kusvika makumi maviri mujerimuUnited States - no deposit casino bonus free spins. Vanyengeri vanowanzoita sokuti vari vamiririri vehurumende dzinobatsira uye votsvaka rubatsiro rwako kune avo vanotamburanjodzi dzinongoitika dzoga, kutambudzwa kwegandanga, kukakavadzana kweruwa kana zvirwere. Kana iwe uri munhu akabatwa neE-online scam, zvinokosha kuti iwe uiseiyo mharidzo kuAustralia Cybercrime Online Reporting Network (ACORN) nokukurumidza sezvazvinogona. Mishumo yakaitwa kune iyi network inotumira mapurisakana masangano ekuchenjera kuitira kuti zvigone kutsvakurudzwa.
Jason Adler, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt ,rinotarisa pamhando dzemhando dzekutsvaga dzekutsvaga nechinangwa kukubatsira kuti uzvidzivirire kubva pamatambudziko.
Mhando dzakawanda kwazvo dzekunyengera kwepakombiyuta ndeyeIndaneti mabhizimisi ekunyengedza, zvinonyadzisa, kubata mazita,uye kutenga uye auction site fraudhi.
Inotsanangurwa sekuti kushandiswa kwezvinogona kunge zvisingabvumirwi pamutemo kuwana zvinhu, zvegaruzivo, pfuma kana mari nedare rega rega kana hacker. Mhando dzakawanda dze internet internet banking udzvinyiriri ndezvokuchengetedza muleve uyephishing. Vatengesi vanowanzoshandisa mashoko enyu ane ruzivo sepa password kana username kuti uwane zvido zvako. Vanogona kuwana ruzivo rwakadaro kubvamahwendefa ako, mafoni efoni kana laptops nokutumira malware uye mavairasi.
Mazuva ano, vanhu vakawanda vanoshandisa mauto avo uye mafoni kuti vawane bhangi ravonhoroondo. Vanopara mhosva vanoziva kuti zvingave zvakaoma kuti vawane ruzivo rwenyu. Saka, vanotumira ma-email fake kana kuti kukumbira kuti uone pane zvakanangahukama, kuzarura ruzivo rwakavanzika. Iwe haufaniri kupindura kune emaizai asingazivikanwi. Zvakakoshawo kuti iwe usanamatira pane zvisungo zvisingazivikanwiuye usingaregi vanhu vanoramba vachikutumirai zvinyorwa.
Kuedza, kune rumwe rutivi, ndezvekuedza kuwana ruzivo rwakananga seusername, password, PayPal ID uye zvichemo zvekadhi rechikwereti, nokuzvishandura sezvivimbiso zvakavimbika mumagetsi ekukurukurirana.
Zvinyorwa zvinoshandiswa zvepa spam zvinobatsira kuderedza nhamba ye phishing emails inosvika kwauriinboxes. Iwe unogona zvakare kuisa antivirus kana anti-malware software kuti uchengetedze mashoko ako akachengetedzwa. Iyo AFP inoratidza kuti haupindurispam emails uye uzvichenese nokukurumidza. Kana pane zvimwe zvibatanidzwa, haufaniri kuzarura zvinyorwa izvo zvingave zvinemapurogiramu asina kudiwa kana mavairasi.
Kutenga uye kutengesa nzvimbo yekunyengera
Vatengesi vanowanzoshandisa teknolojia yezvino kuisa mawekitari ekutengesa fake anotarisasezvinozivikanwa mune zvekutengesa mabhizimisi. Vanoshandisa nzira dzakanakisisa uye zvigadzirwa zvekukwezva vanhu vakawanda. Zvakakosha kuti iwe usadaronyora mashoko ako ega, kadhi yemakadhi yekwereti kana PayPal ID kune mamwe mawebsite. Zvose zvepaIndaneti zvinyorwa zvinowanikwa mitemo nemitemo yakasimba.Scammers haagoni kukurwisa iwe kuburikidza nemamwe mawebhusayithi, uye vanoziva kubata nevanhu kunze kwemasayiti. Iwe unogona kutaurirana neKomisheni yeCompetition uye Consumer Commission kuti kuderedze njodzi dzekunyengera kwepakombiyuta. Paunenge uchishandisa mabhizinesi ekutengesera seBay, ivo vachadarokwete kukubvunza chero chinhu pamusoro pekadhi rako rechikwereti kana PayPal.
Kana wakanga uchigamuchira tsamba dzinoshungurudza, nzira yakanakisisa uye iri nyore ndeyekubvisaivo sezvavanokurumidza. Zvakakoshawo kuti iwe usanamatira pazvibatanidzwa zvinotumirwa kuburikidza neemaimeri.